Tababbarka shaqada. Waa maxay sideese u shaqaysaa | Ragga Stylish
Xaqiiqdii waad maqashay tababar shaqo. Waxyaabaha noqday gebi ahaanba moodada kuwa ugu caansan ciyaartooyda iyo in bulshada jir dhiska ay isku dayaan inay sameeyaan. Waa tababar siiya natiijooyin aad u wanaagsan kuwa sameeya.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa waxa tababarka tababarku yahay, waxa uu ka kooban yahay iyo sida loo fuliyo si aad sidoo kale uga faa'iideysato natiijooyinkiisa.
1 Waa maxay u-ekaanta shaqadu?
2 Abuur himilooyin oo raac iyaga
3 Tusaalaha tababarka shaqada
4 Sida tababarka loogu dhexgalo nolol maalmeedka
Waa maxay u-ekaanta shaqadu?
Tababbarka noocan ahi wuxuu noqday wax ku dhaca bushimaha dhammaan ciyaartooyda sannadihii la soo dhaafay. Ciyaartooy caan ah iyo ciyaartooy kale oo caan ah ayaa ah kuwa kor u qaaday magacooda, iyagoo u maraya faa'iidooyinka ay bixiyaan. Waa nooc tababar ah oo u baahan aqoon kala duwan si loo fuliyo iyo waxaa jira dad badan oo sheeganaya khubaro mana aha. Way fududahay in la iska indho tiro inbadan oo ka mid ah qodobbada muhiimka u ah habka shaqada in ay noqdaan kuwo waxtar leh.
Tababbarka waxqabadka waa midka leh ujeeddo lafteeda. Waxaa jira dad badan oo bilaaba tababarka jimicsiga oo aan si fiican u garanayn ujeedkooda ama ujeedkoodu. Kahor intaadan bilaabin tababarka sida waallida ah, dejiso himilo fog ama mid dhexdhexaad ah oo macquul ah. Guud ahaan, yoolalkaas muddada-gaaban ma ahan kuwo macquul ah maadaama qiiq badan uu ka jiro shaashadaha xayeysiinta iyo dhammaan warbaahinta. Waxaan aragnaa dad muruqyo ah oo aan dabiici ahayn mana ogin dhammaan habka ay u qaadato. Waxaan u maleyneynaa taas way fududahay in la helo waxaana na hagaya quraafaadyo been ah waxayna rajeyneysaa inay noo fidiyaan si aan wadada ugu fududeyno.
Abuur himilooyin oo raac iyaga
Tababbarka waxqabadka waa midka taas Waxaa loogu talagalay inay la kulanto ujeeddooyin gaar ah waxayna sidoo kale isku dayeysaa in lagu daboolo waqtiga la soo jeediyey. Tusaale ahaan, haddii qofku doonayo kasbashada muruqyadaKaliya uma baahnid inaad isticmaasho nooc tababar ah oo ku habboon yoolalkaaga, laakiin u beddel dhaqankaaga nolosha oo dhan yoolkaas. Tusaale ahaan, waa wax aan macquul aheyn in la gaaro hypertrophy muruqa iyada oo aan la helin cunto habboon iyo qaab nololeed caafimaad leh. Waxtar ma leh in sida ugu fiican loo qabto joogtada ah si loo kordhiyo murqaha haddii aynaan sifiican wax u cunin wixii markaa ka dambeeya ama aan cabno usbuuc walba xitaa biyaha ka soo baxa weelasha.
Tababbarka oo dhan wuxuu diiradda saarayaa gaaritaanka ujeeddada la soo jeediyey iyo faahfaahinta waxaa loogu talagalay si faahfaahsan si loo hagaajiyo natiijooyinka. Tababbarka noocan ah wuxuu ka yimid baahida bukaano badan si ay dib ugu soo ceshadaan taam ahaantooda dhaawaca kadib. Si kastaba ha noqotee, ma aha oo kaliya inay u adeegto inay ku soo celiso ciyaartoyda qaab nololeedkooda maalinlaha ah, laakiin sidoo kale waxay ka caawisaa diyaariyeyaasha inay yareeyaan natiijooyinka korna u qaad waxqabadka macaamiishaada.
Tusaalaha tababarka shaqada
Tusaale ahaan, aan u qaadanno in macmiilka kiiskan yahay qof sanado badan u shaqeynayay sidii lebenle. Qofkaasi wuxuu kor u qaadayay sanduuqyo, wuxuu soo qaadayay gaari-gacmeedyo, wuxuu jiidayay jaantusyo si kor loogu qaado culeyska, waqti dheer qorraxda, wuxuu la shaqeynayay qalab culus muddo dheer. Maalinba maalinta ka dambeysa, sanadba sanadka ka dambeeya, kala-goysyada iyo muruqyada way daciifayaan, sidoo kale muruqyada way liitaan Sidaa darteed, tababaraha jireed, xaaladdan tababaraha shaqsiyeed, waa inuu diyaariyaa jimicsi jimicsi oo diiradda lagu saarayo xoojinta kooxaha muruqyada ee inta badan ku dhaqma inta lagu guda jiro shaqadooda si loo kordhiyo waxtarkooda iyo awooddooda ka jawaab celinta kicinta kala duwan.
Kaliya maahan inay xoojiso muruqyadaada si aad si fiican ugu jiidan karto culeyska ay tahay inaad ku shaqeyso, waxay kaa caawineysaa inaad saxdo qaabka aad ku qabaneyso howlahaaga isla markaana aad uga dhigeyso mid aad u tayo badan. Tani waa waxa tababarka waxqabadka uu ku saabsan yahay. Waa qorshe dhameystiran si bukaanku ula qabsado qaab nololeedkooda, ugana dhigo mid fudud, ka waxtar badan kana fogaado dhaawacyada suuragalka ah. Dhammaan tababarka dhammeystiran wuxuu diiradda saarayaa hal ujeedo oo ah in lagu wanaajiyo waxtarka shaqadaada.
Sida tababarka loogu dhexgalo nolol maalmeedka
Waana inay tahay in tababarka shaqadu yahay dhexgal dhammaan dhinacyada kaladuwan ee dhaqdhaqaaqa aadanaha. Haddii aad rabto inaad khabiir ku ahaato tababarka noocan ah, waxaa lagama maarmaan ah inaad barato qaababka dhaqdhaqaaqa aadanaha, u fiirso carruurta sida ay u dhaqmaan, dadka waaweyn sida ay u shaqeeyaan iyo cayaaraha sida ay u qabtaan isboortiga. Laga soo bilaabo dhammaan noocyada fiirsashada, shaqadu waxay ka bilaabmaysaa khaladaadka ugu caansan dhammaantood.
Khaladaadka badanaa lagu sameeyo nolosheena oo dhan si tartiib tartiib ah ayaa loo qaatay iyada oo ay sabab u tahay monotony. Kan saacadaha iyo saacadaha ku qaata kumbuyuutarka hortiisa, waxay ku egtahay kor u qaadista booskaaga oo ma ixtiraamayso habka ay tahay inaad si sax ah u fadhiisato. Sidaa darteed, dhibaatooyinka dhaqdhaqaaqa, dhabar xanuunka, daciifnimada wadajirka ah, iwm ayaa bilaaba inay muuqdaan. Tababbarka shaqada waxaad ku sixi kartaa khaladaadka qaarkood nolol maalmeedka waxaadna u rogi kartaa caadooyinka xun kuwo caafimaad qaba.
Maaddaama, nolosha oo dhan, waxaan la kulmi doonnaa noocyo kala duwan oo dad ah, xaalado iyo dhaqanno xun, waa inaan dejinno qaabab shaqo oo u adeega xidid u noqoshada dhibaatooyinka. Magac ahaan, dadka fadhiga badan waa inay wax ka beddelaan qaabkooda markay fadhiyaan, Kordhi dhaqdhaqaaqa jirka oo samee jimicsi ku lug leh kooxaha muruqyada ee sida aadka ah u saameeya muuqaal ahaan. Sidan oo kale waxaan ku xoojin doonnaa awoodaha jidhkeenna waxaanan maalinteena maanta ka dhigi doonnaa mid waxtar leh.
Haddii aan sidoo kale gaarno in cuntada ay la jaanqaadayso ujeeddooyinkeenna, waxaan ku hagaajin doonnaa natiijooyinka heerarka sare. Waa inaad ka fikirto in tababarka uu yahay mid guud oo lagu daro qaab nololeedkeena. Nooc tababar ah oo ka dhigaya maalin-maalmeedkeenna mid waxtar leh, oo kordhiya fayoobaantayada iyo caafimaadkeenna una horseeda inaynu nafteena in badan raadsanno.
Waa inaan daryeelnaa jidhkeenna dhaawacmay maalinba maalinta ka dambaysa, maadaama ay tahay weelka keliya ee aan haysanno. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan uu faa'iido kuu ahaa inaad wax badan ka barato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Tababar shaqo
Dharka ragga 2019